Magaalo Raga laga Mamnuucay | Goobsan Media Inc
Home Arimaha Bulshada Magaalo Raga laga Mamnuucay
Magaalo Raga laga Mamnuucay
Dumarka degan magaaladani waxay u barooranayaan rag , maaha inay doonayaan inay xal u helaan arrin adag, laakiin waa iyadoo magaladii aanay joogin wax rag ahi oo ay isugu soo hadheen dumar gashaantimo ah iyo islaamo.
Gabadha Maria de Lima waxay samaysay ururka haweenka sumcadda laga dilay, waxayna degeen magaaladan oo ay ka mamnuuceen in raga oo kibir badani degi Karin. Dumarka magaaladan ee caruurta haysta wiilkoodu lama joogi karo wixii ka danbeeya 18 sano. Dumarkaasi ayaa ah kuwo ragooda ugu tago magaaloyinka kale ee ay degan yihiin.
Gabadh kasta oo doonaysa inay magaaladan ku noolaato waa inay si taxadar leh uga fikirto hor inta aanay soo deign.